Ndị ụlọ ọrụ wepụtara ụfọdụ ọdịnaya dị egwu site na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ saịtị ndị ọzọ ga-erite uru na akara ha na saịtị nke aka ha. Agbanyeghị, ịmepụta usoro ebe ọ bụla foto Instagram ma ọ bụ mmelite Facebook chọrọ bipụtara ma melite na saịtị gị enweghị ike ịba uru.
Nhọrọ kachasị mma bụ bipụtara ndepụta mmekọrịta na saịtị gị na otu ma ọ bụ ibe nke weebụsaịtị gị. Inye ha na ijiko ihe omuma obula nwere ike siere difficult mana obi oma, enwere oru maka nke a!
Ihe ọ Juụ Juụ bụ ụzọ dị mfe iji kpokọta hashtag gị na mgbasa ozi mgbasa ozi gị na otu nchịkọta mgbasa ozi mmekọrịta mara mma na webụsaịtị gị.
Site na ngwọta aha ha na-acha ọcha, ndị na-ere ahịa dijitalụ nwere ike ijikọ ọrụ Juicer n'ime ngwugwu ha na-enweghị ndị ahịa ha mgbe ha matara na Juicer gụnyere.